US ga-amanye ikike ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka azụmaahịa nkeonwe ka afọ ọhụrụ gachara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » US ga-amanye ikike ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka azụmaahịa nkeonwe ka afọ ọhụrụ gachara
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
US ga-amanye ikike ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka azụmaahịa nkeonwe ka afọ ọhụrụ gachara.
Ọ dị mkpa ịghọta na a ka nwere ọtụtụ ndị ọrụ anaghị echebe ma nọrọ n'ihe ize ndụ site na ịrịa ọrịa siri ike ma ọ bụ ịnwụ site na COVID-19.
US ga-amalite ịmanye mmanye ọgwụ mgbochi coronavirus maka ndị ọrụ ngalaba na-amalite na Jenụwarị 4.
Ọdịda irube isi n'iwu ọgwụ mgbochi ahụ ga-eweta ntaramahụhụ siri ike maka azụmaahịa, nke ga-eche ntaramahụhụ dị ihe ruru $14,000 kwa mmebi.
Ntara ahụ ga-abawanye site na ọtụtụ mmebi iwu, ndị isi kwuru.
The White House ekwuputala taa na US ga-amalite ịmanye iwu mgbochi mgbochi COVID-19 nke President Biden maka ndị ọrụ ngalaba na-amalite na Jenụwarị 4, 2022.
A ga-amanye ịgba ọgwụ mgbochi coronavirus maka azụmaahịa mgbe afọ ọhụrụ gachara, dịka ọrụ mgbasa ozi White House si kwuo. A ga-anwale ndị na-abụghị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa kwa izu.
"Ọ dị mkpa ịghọta na a ka nwere ọtụtụ ndị ọrụ anaghị echebe ma nọrọ n'ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa siri ike ma ọ bụ ịnwụ site na COVID-19," nkwupụta ọrụ mgbasa ozi White House kwuru.
Ọdịda irube isi n'iwu ọgwụ mgbochi COVID-19 ga-enweta ntaramahụhụ dị ukwuu maka azụmaahịa, nke ga-eche ntaramahụhụ dị ihe ruru $14,000 kwa mmebi.
Ntara ga-abawanye site na ọtụtụ mmebi iwu, ndị agadi White House ndị isi kwuru. Amabeghị ozugbo ma enwere ike ịchụpụ ndị ọrụ ma ọ bụrụ na ha jụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ nnwale.
Ihe a chọrọ maka ndị ọrụ ngo gọọmentị etiti ga-agba ọgwụ mgbochi azụ azụ otu ọnwa ma a ga-etinye ya n'ọrụ site n'otu ụbọchị ahụ.
"Ka ọ na-erule Jenụwarị 4, 2022, ụlọ ọrụ [ahụike] ga-ahụrịrị na ndị ọrụ niile enwetala ọgwụ ndị dị mkpa iji gbaa ọgwụ mgbochi zuru oke - ma ọ bụ ọgwụ abụọ nke Pfizer, usoro abụọ nke Moderna, ma ọ bụ otu dose nke Johnson & Johnson. White House onye isi ochichi kwuru.